Akụkọ - Ọ kwesịrị ka m họrọ ahịrị mmepụta ma ọ bụ ihe ntụgharị maka ngwọta IV?
Ekwesịrị m ịhọrọ ahịrị mmepụta ma ọ bụ ihe nrụgharị turnkey maka azịza IV?
N'oge a, site na nkwalite nka na ụzụ na ibi ndụ, ndị mmadụ na -eleba ahụike ha anya nke ọma. Yabụ enwere ọtụtụ ndị enyi sitere na ngalaba azụmaahịa dị iche iche, ha nwere nchekwube gbasara ụlọ ọrụ ọgwụ ma chọọ itinye ụlọ ọrụ ọgwụ, na -atụ anya inye onyinye ụfọdụ na ahụike mmadụ.
Ya mere, enwetara m ọtụtụ ajụjụ ndị dị otu a.
Kedu ihe kpatara na ọ na -ewe nde dollar anyị maka ọrụ ọgwụ ọgwụ IV?
Kedu ihe kpatara ụlọ dị ọcha kwesịrị iji bụrụ 10000 sq ft?
The igwe na broshuọ adịghị ka na nnukwu?
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti IV ngwọta mmepụta akara na oru ngo?
Shanghai IVEN bụ onye nrụpụta maka ahịrị mmepụta ma na -arụkwa ọrụ ntụgharị aka. Ruo ugbu a, anyị ebupụla ọtụtụ narị ahịrị mmepụta na ọrụ ntụgharị 23. Ọ ga -amasị m ịnye gị obere okwu mmeghe nke ọrụ ahụ na ahịrị mmepụta, iji nyere ụfọdụ ndị na -etinye ego aka ịghọta nke ọma idozi ụlọ ọrụ ọgwụ ọhụrụ.
Ọ ga -amasị m ị were glucose karama iv ngwọta glucose dịka ọmụmaatụ, gosi gị ihe ekwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọlite ​​ụlọ ọrụ ọgwụ ọhụrụ.
A na -eji pv karama iv eme ihe n'ọtụtụ ebe saline, glucose wdg.
Iji nweta a ruru eru glucose p karama, usoro bụ dị ka ndị a:
Part 1: Production akara (Efu karama Ndinam, Ịsa-ejuputa-akara)
Nkebi nke 2: Usoro ọgwụgwọ mmiri (nweta mmiri maka ịgba site na teepu)
Akụkụ nke 3: Usoro nkwadebe ngwọta (iji kwadebe glucose maka ntụtụ site na mmiri maka ntụtụ na akụrụngwa glucose)
Nkebi nke 4: Sterilization (mee ka karama jupụta na mmiri mmiri, wepụ pyrogen n'ime) ma ọ bụrụ na ọ bụghị, pyrogen ga -ebute ọnwụ mmadụ
Akụkụ 5: Nnyocha (nyocha mgbapụta na ahụ n'ime nyocha karama, iji hụ na ngwaahịa emechara ruru eru)
Nkebi nke 6: Nkwakọ ngwaahịa (ịdebanye aha, koodu ogbe ebipụta, ụbọchị nrụpụta, ụbọchị kubie ume, tinye n'ime igbe ma ọ bụ katọn nwere akwụkwọ ntuziaka, ngwaahịa emechara na nchekwa maka ire ere)
Nkebi nke 7: ime ụlọ dị ọcha (iji hụ na gburugburu ebe obibi ogbako ahụ, iru mmiri, dị ọcha dị ka GMP chọrọ, mgbidi, elu ụlọ, ala, ọkụ, ibo ụzọ, igbe mbata, windo, wdg niile bụ ihe dị iche iche site na ịchọ ụlọ gị mma.)
Akụkụ 8: Ihe eji enyere ndụ aka (igwe mpịakọta ikuku, igwe esi mmiri ọkụ, chiller wdg.)
Site na nke a chaatị, ị pụrụ ịhụ, na eyi karama mmepụta akara, nanị ole na ole ngọngọ ke dum oru ngo. Ọ bụ naanị ndị ahịa kwesịrị ịkwadebe pp granule, mgbe ahụ anyị na-enye ahịrị mmepụta karama pp, iji ghọta ntụtụ ụzọ, ịgba mmanya, pp karama na-afụ, iji nweta karama efu na p granule. Mgbe ahụ ịsa karama efu, jupụta mmiri mmiri, okpu akara, nke ahụ bụ usoro zuru oke maka ahịrị mmepụta.
Maka ọrụ ntụgharị, nrụpụta ụlọ nrụpụta ahaziri iche, mpaghara klaasị dị ọcha nwere nrụgide dị iche iche, na -enwe olileanya na ikuku dị ọcha na -esi na klaasị A ruo na klas D.
Nke a bụ nhazi ụlọ ọrụ maka amaokwu gị.
The eyi karama mmepụta akara ebe bụ banyere 20m * 5m, ma dum oru ngo ogbako bụ 75m * 20m, na i kwesịrị ịtụle ebe maka ụlọ nyocha, nkwakọba maka akụrụngwa na okokụre ngwaahịa, na ngụkọta bụ banyere 4500 sqm.
Mgbe ị ga -ehiwe ụlọ nrụpụta ọgwụ ọhụrụ, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee akụkụ ndị a:
1) Nhọrọ adreesị ụlọ ọrụ
2) Ndebanye aha
3) itinye ego ego na ego otu afọ na -agba
4) ọkọlọtọ GMP/FDA
Ịrụ ụlọ nrụpụta ọgwụ ọhụrụ, Ọ dịghị ka ịmalite azụmahịa ọhụrụ dị ka osisi mmiri ịnweta mmiri, osisi mmanụ a honeyụ. Na o nwere ihe nditịm ọkọlọtọ na GMP / FDA / WHO ụkpụrụ ndị ọzọ akwụkwọ. Otu ihe eji arụ ọrụ na-ewe ihe karịrị 60 iberibe 40ft, yana ihe karịrị ndị ọrụ 50, nkezi ọnwa 3-6 na nrụnye saịtị, mmezi na ọzụzụ. Ịkwesịrị ka gị na ọtụtụ ndị na -ebubata ihe na -emekọrịta ihe, kpaa nkata oge nnyefe ziri ezi dị ka usoro ọrụ si dị.
Ihe bụ ihe ọzọ, e nwere ga-abụ ụfọdụ njikọ / n'ọnụ n'etiti 2 ma ọ bụ karịa suppliers. Kedu otu esi etinye karama site na sterilizer ruo belt tupu ịdebanye aha?
Kedu onye ga -ahụ maka aha mmado anaghị arapara na karama? Ndị na -ebubata igwe ga -asị, 'ọ bụ nsogbu karama gị, karama ndị a na -emepụtabeghị ụlọ ọgwụ adịchaghị mma maka mkpado akara.' Ndị na -ebubata Sterilizer ga -asị, 'Ọ bụghị ọrụ anyị, nsị anyị bụ ịgba ọgwụ mgbochi na iwepụ pyrogen, anyị wee nweta ya, nke ahụ ezuola. Kedu ka ị ga -esi chọọ ka onye na -ebubata sterilizer na -eche banyere ụdị karama ahụ dị nkọ! '
Ndị na -ebubata ngwaahịa ọ bụla kwuru, sị, ha kacha mma, ngwaahịa ha tozuru oke, mana n'ikpeazụ ị nweghị ike nweta ngwaahịa ruru eru pp glucose karama. Ya mere, ihe i nwere ike ime?
Cask theory --- cubage nke cask dabere na efere osisi dị mkpụmkpụ. Ọrụ ntụgharị bụ nnukwu igbe, ọ mejupụtara ọtụtụ efere osisi dị iche iche.
Ọgwụ IVEN, dị ka onye na-arụ osisi, naanị ihe ị ga-eme bụ ijikọ na IVEN, gwa anyị ihe ị chọrọ, dị ka 4000bph-500ml, anyị ga-emepụta akpa ahụ, mgbe ekwenyechara gị, ngwaahịa 80-90% ga-emepụta, ngwaahịa 10-20%. ga -ewepụta akụ. Anyị ga -enyocha ogo efere ọ bụla, hụ na njikọ nke efere ọ bụla, mee nhazi oge, iji nyere gị aka ịghọta nnwale na -emepụta n'oge dị mkpirikpi.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ahịrị mmepụta karama pp, bụ otu akụkụ nke ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe ịhazi ihe niile, nwee oge na ume iji dozie nsogbu niile n'onwe gị, ị nwere ike họrọ ịzụta ahịrị mmepụta iche iche dịka masịrị gị. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ahụmahụ, ma na-achọ iji nweta ego azụ asap, biko obi na-asị: Professional ejiri ọkachamara omume!
IVEN bụ onye gị mgbe niile!
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Singer,